OPPO A55 Specs | OPPO မြန်မာ
Starry Black | Rainbow Blue
Height: 163.6 mm Width: 75.7 mm Thickness: 8.4 mm Weight: 193+/-3g * ကုန်ပစ္စည်း၏ အရွယ်အစားနှင့် အလေးချိန်သည် စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှု၊ ထုတ်လုပ်မှု အစဉ်နှင့် တိုင်းတာမှုများအပေါ်မူတည်၍ အနည်းငယ်ကွဲလွဲနိုင်ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်း အမှန်တကယ်ထွက်ရှိလာချိန် ဖော်ပြချက်များကို အတည်ပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။
4 GB + 128 GB RAM Type: LPDDR4X @ 1600 MHz,2x 16 bits External Memory: MicroSD card (Max storage: 256 GB) USB Version: USB 2.0 USB OTG: Supported * ဆော့ဝဲလ်များ ထည့်သွင်းနေရာယူမှုကြောင့် ရရှိနိုင်သော internal storage သည် အနည်းငယ်လျော့နည်းနိုင်ပါသည်။ အမှန်တကယ်ရရှိမည့် မမ်မိုရီသိမ်းဆည်းနိုင်သောပမာဏသည် အက်ပလီကေးရှင်းများအား update ပြုလုပ်ခြင်း၊ အသုံးပြုသူ၏ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် အခြားသော သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များအပေါ်မူတည်၍ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲနိုင်ခြေရှိပါသည်။
Size: 6.51'' * 6.43" သည် မျက်နှာပြင်၏ လုံးဝန်းသော ထောင့်များကို သက်ဆိုင်ရာထောင့်များကို ဆွဲဆန့်သည့် ထောင့်ဖြတ်အတိုင်းအတာဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ် အရွယ်အစားသည် ပိုသေးပါသည်။ Screen Ratio: 89.2% Resolution: HD+ (1600 x 720) Refresh Rate: 60Hz Touch Sampling Rate: 120 Hz Colour Depth: 16.7 million colors, 8 bits Colour Gamut: MIN NTSC 65%, TYP 70% Pixel Density: 269 PPI Contrast Ratio: 1500:1 Brightness: Typical value: 480 nits / Typical value under sunlight: 550 nits Panel: LCD（A-Si） Cover Glass: NEG T2X-1
Rear Main camera: F/1.8; FOV 77°; 5P lens; AF supported; open-loop focus motor; OIS not supported Macro: F/2.4; FOV 88.8°; 3P lens; AF and OIS not supported Mono camera: F/2.4; FOV 88.8°; 3P lens; AF and OIS not supported
Front Front camera: 16MP (f/2.0) FOV 79.3° 5P lens AF not supported OIS not supported
Shooting Mode Photo, Video, Night, Portrait, Panoramic, Macro, Sticker, Time-lapse, Expert
Image Size Maximum size: 8160 x 6144 (50M mode) Photo sizes in different aspect ratios: 4096 x 3072 (4:3) 3072 x 3072 (1:1) 4096 x 1840 (full screen) 4096 x 2304 (16:9)
Rear Rear camera: 1080P@30 fps and 720P@30 fps (1080P@30 fps by default) Video zoom: 1080P@30 fps, 720P@30 fps
Front Front camera: 1080P/720P@30 fps (Default: 720P@30 fps; portrait retouching turned on) Video zoom or slow motion is not supported by the front camera.
CPU: MediaTek Helio G35 CPU Speed: up to 2.3GHz CPU Cores: 8 GPU Model: IMG GE8320 @ 680 MHz
4890 mAh/18.92 Wh (Rated value) 5000 mAh/19.35 Wh (Typical value)
လက်ဗွေဖတ်စနစ်နှင့် မျက်နှာဖြင့် ဖုန်းလော့ခ်ဖြည်စနစ် အထောက်အပံ့
Geomagnetic sensor Light sensor Proximity sensor Accelerometer Gravity sensor ယခု အမျိုးအစားတွင် ဂိုင်ရိုစကုပ်နှင့် built-in hardware pedometer (ခြေလှမ်းတွက်စနစ်) မပါဝင်ပါ။
SIM2 : Supported SIM Card Type : Nano-SIM * ကွန်ရက်ပေါ်တွင် အသုံးပြုနိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ၏ ကွန်ရက်နှင့် ဆက်စပ်ဝန်ဆောင်မှုများ၏ အခြေအနေများပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
2G (GSM): 850/900/1800/1900 MHz 3G (WCDMA): B1/B5/B8 4G: TD-LTE bands 38/40/41 (2535-2655 MHz) 4G: LTE FDD bands 1/3/5/8 5G: Not supported
Bluetooth Version: Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy Bluetooth Audio Codec: SBC, AAC, aptX, LDAC USB Interface: USB Type-C Earphone Jack: 3.5mm NFC: Not supported
GNSS: GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS Frequency Antenna : GPS: L1, Galileo: E1, BeiDou: B1l, Glonass: L1, QZSS: L1 Others : A-GPS, Wi-Fi, mobile network, and electronic compass Maps: Google Map and other third-party map apps are supported.
Phone x 1 Charger x 1 USB data cable x 1 SIM Ejector Tool x 1 Safety Guide x 1 Quick Guide x 1 Protective Case x 1
ရိုးရှင်းသောအသွင်အပြင်အတွက် OPPO စမတ်ဖုန်းအရှေ့ဘက်ရှိ proximity sensor ကို ဖုံးကွယ်ရန် အထူးနည်းပညာကို အသုံးပြုထားသည်။ ဖလင် သို့မဟုတ် အကာအကွယ်သည် proximity sensor ဧရိယာကို ဖုံးထားလျှင် ၎င်းသည် proximity လုပ်ဆောင်ချက် မူမမှန်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အသေးစိတ်အတွက် OPPO ၏ တရားဝင် ကာဗာနှင့် ဖလင်ပုံစံကို ရည်ညွှန်းပါ။